Engu, Nigeria - iro rinotevera guta muStar Alliance Ethiopian Airlines network
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhau » Engu, Nigeria - iro rinotevera guta muStar Alliance Ethiopian Airlines network
Addis Ababa, Ethiopia kuEnugu, Nigeria - iyi ndiyo nzira nyowani yekutakura mureza weEthiopia uye nhengo yeStar Alliance ichaunza kubva muna Nyamavhuvhu 24, 2013.
Enugu ndiro guta guru reEnugu State muNigeria. Inowanikwa kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweNigeria. Guta rine huwandu hwevanhu makumi manomwe nezviviri nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nenhanhatu maererano nehuwandu hweNigeriya hwa722,664. Zita rekuti Enugu rakatorwa kubva kumazwi maviri echiIgbo anoreva "pamusoro pegomo" anoratidza nzvimbo ine makomo eguta. Guta rakatumidzwa zita raEnugwu Ngwo iro marasha akawanikwa pasi paro.
Maindasitiri ari muguta anosanganisira musika wedhorobha nemaindasitiri emabhodhoro. Enugu yakave inodiwa nzvimbo yekutora mafirimu kwevatungamiriri veNigerian indasitiri yemamuvhi, inonzi "Nollywood". Enugu airport huru ndeAkanu Ibiam International Airport. Nzvimbo huru yekudzidzisa muguta iri iyo Enugu kambasi yeYunivhesiti yeNigeria iri muNsukka, guta riri kuchamhembe kweEnugu uye mudunhu rimwe chete.
Ethiopian Airlines ichave yekutanga mutakuri wepasi rose kubhururuka kuenda kuEngu. Itiopiya ichawedzerawo ndege dzayo shanu dzevhiki kuenda kuAbuja kuenda kusevhisi yezuva nezuva
Itiopiya ichashanda kanomwe pavhiki kuEnugu, 76th kwairi kuenda. Ethiopian Airlines inoonekwa sePan African airline, uye ndeimwe yevatakuri vekare vanobhururuka kuenda kuNigeria kubva 1960. Izvi zvaive nekusimbisa kwekutengeserana, tsika uye hukama hwekushanya pakati peNigeria nepasi rose.
Zvino, vafambi vanobva kuEnugu vachange vaine nongedzo dzendege dzakanangana nenzvimbo zhinji muAfrica, Middle East, Asia, South America neEurope pamwe nezvikepe zvidiki uye zvemazuva ano mukondinendi uye vanofarira kugamuchirwa kwevaEthiopiya.
“Kubhururuka kwedu kuenda kuEnugu ndeimwe nhanho inonakidza mukusimudzira kuzvipira kwedu kuzvido zvevoruzhinji vedu vanofamba. Nigeria yakagara iri uye inoenderera kuve imwe yenzvimbo dzedu dzakakosha muWest Africa. Tiri kuramba tichivandudza zvigadzirwa zvedu nemasevhisi kusangana nezvinotarisirwa nevatengi vedu. Tinotenda vanhu pamwe nehurumende yeNigeria nekuramba vachitsigira kuti basa idzva iri riitwe naEnugu, ”akadaro Tewolde Gebremariam, CEO weEthiopia.
Vatakuri vanobva kumasuwo edu matatu muNigeria - Lagos, Abuja neEnugu - vava nemukana wekubhururuka kuenda kunzvimbo dzese munzvimbo yeEthiopia, kusanganisira Guangzhou, Hangzhou, Hong Kong, Seoul, Bangkok, Kuala Lumpur, London, Toronto, Beijing, Beirut, Dubai, Mumbai, neNairobi.